Twitch | တွင်ငွေရှာနည်း e-commerce သတင်း
Encarni Arcoya | 15/05/2022 23:00 | လူမှုကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး
သင့်တွင် လုပ်ငန်းတစ်ခုရှိလျှင် ၎င်းမှငွေရှာလိုခြင်း ဖြစ်နိုင်ခြေများပါသည်။ သို့သော် တစ်ခါတစ်ရံတွင် သင့်ကုမ္ပဏီမှတစ်ဆင့် ၀င်ငွေများဝင်လာနိုင်သည်သာမက၊ လူမှုကွန်ရက်တွေကနေလည်း လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်၊ streaming မှတဆင့်။ ဒီအချိန်မှာ Youtube ကို သင်တွေးနိုင်ပေမယ့် အမှန်တရားကတော့ အဲဒါပါပဲ။ ပိုကြီးတဲ့ လူမှုကွန်ရက်တစ်ခု ရှိပြီး သင့်အတွက် ပိုကောင်းတဲ့ လစာတွေကို ပေးဆောင်နိုင်ပါတယ်။. Twitch တွင်ငွေရှာနည်းကိုသင်သိပါသလား။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်နှင့် သံယောဇဉ်တစ်ခုကို တီးခတ်ခဲ့ပြီး သင့်လုပ်ငန်းအပြင် အခြားသော ဝင်ငွေအရင်းအမြစ်ကို မည်သို့ရယူမည်ကို သိရှိလိုပါက ကျွန်ုပ်တို့ရှင်းပြမည့်အရာသည် သင့်အတွက် စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်သည်။ အများကြီး။
1 Twitch၊ တိုက်ရိုက်အကြောင်းအရာပလပ်ဖောင်းအသစ်
2 Twitch မှာပိုက်ဆံဘယ်လောက်ကျလဲ
3 Twitch နဲ့ဘယ်လိုငွေရှာရမလဲ
3.3 Twitch တွင်ကြော်ငြာခြင်း။
3.4 ပံ့ပိုးကူညီမှုများ၊ တွဲဖက်...
4 လက်တွေ့နမူနာတစ်ခုသည် eCommerce ကိုအာရုံစိုက်သည်။
မင်းသိတဲ့အတိုင်းပဲ၊ ဗီဒီယိုတွေအကြောင်းပြောတဲ့အခါ YouTube ကို စဉ်းစားတာက ပုံမှန်ပါပဲ။ တိုက်ရိုက်အားဖြင့်၊ ဖြစ်နိုင်သည်မှာ Facebook သို့မဟုတ် Instagram ပိုများသည်။ ဒါပေမယ့် အမှန်တရားကတော့ အဲဒါအမှန်ပါပဲ။ Twitch သည် လူမှုကွန်ရက်များမှ ကောင်းမွန်သောအရာအားလုံးကို ယူဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ တစ်ခုတည်းအဖြစ် ပေါင်းစပ်ထားသည်။
ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ဤသို့ပြောနိုင်သည် Twitch သည် တိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုများပါရှိသော streaming platform တစ်ခုဖြစ်သည်။ဒါပေမယ့် မှတ်တမ်းတင်ပြီး တည်းဖြတ်တာမျိုးလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ သို့ရာတွင်၊ အရေးကြီးဆုံးမှာ ပထမအချက်မှာ ရိုးရာရုပ်မြင်သံကြားနှင့် ခပ်ဆင်ဆင်ဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
Twitch ၏လုပ်ဆောင်ချက်သည် freemium ဖော်မတ်နှင့်သက်ဆိုင်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ၊ ဗီဒီယိုတစ်ခုကြည့်ရန် အခါအားလျော်စွာ ကြော်ငြာများကို စားသုံးရန် လိုအပ်သည် သို့မဟုတ် ချန်နယ်တစ်ခုသို့ စာရင်းသွင်းသူအဖြစ် စာရင်းသွင်းနိုင်ပါသည်။ အခြားအပိုလုပ်ဆောင်ချက်များပါရှိခြင်းအပြင် ကြော်ငြာများကို သင်မြင်တွေ့ခြင်းမှ ရပ်တန့်သွားမည်ဖြစ်သည်။
Twitch တွင်ငွေရှာနည်းကိုမေးသောအခါတွင်သေချာပါသည်။ အချို့သော streamer များ၏ ငွေကြေးအမြောက်အမြားကို သတိရမိပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ သုည လေး၊ ငါး ​​သို့မဟုတ် ခြောက် ကိန်းဂဏန်းများဖြင့် လူသိရှင်ကြား ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့် ငါတို့ မင်းကို သတိပေးရမယ်။ အဲဒါကို လက်လှမ်းမှီပြီး ရယူမှာ မဟုတ်ပါဘူး။. သိပ်မနည်းပါဘူး။
အရင်ဆုံး ကိုယ့်ကိုကိုယ် သိအောင်လုပ်ရမယ်။ အချိန်ပေးရမယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ။တခါတရံ မျက်နှာသုတ်ပုဝါထဲ ပစ်ထည့်ဖို့ တွေးပြီး တခြားသူတွေကို အတုယူဖို့ ကြိုးစားတာတွေလည်း အများကြီးပါ။ ဒါပေမယ့် အဲဒါတွေအားလုံးက အတွေ့အကြုံနဲ့ အချိန်တွေဖြစ်ပြီး တဖြည်းဖြည်း၊ သင့်ပရိသတ်များနှင့် ချိတ်ဆက်ရန် စီမံပါက၊ သင်သည် ဝင်ငွေစတင်နိုင်ပါသည်။.
ဒါကြောင့် တစ်ညလုံး မထင်လိုက်ပါနဲ့။ဝေးသည်။ သင်၏ "ချန်နယ်"၊ သင်၏ "အမှတ်တံဆိပ်" ကို အခြားသူများထံ အသံထွက်စေရန် ကြိုးစားအားထုတ်နေပါသည်။
ထို့အတွက်ကြောင့် Twitch တွင် ငွေမည်မျှရသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ မပြောနိုင်ပါ။ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များစွာပေါ်တွင်မူတည်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။. ကျော်ကြားသူတစ်ဦးမှဖွင့်သောချန်နယ်သည် ၎င်း၏မိသားစုနှင့် ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေများမှသာ သိသူမှသိသောသူတစ်ဦးနှင့် မတူပါ။
အဲဒါက မင်းငွေရှာလို့မရဘူးလို့ ငါတို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ အမှန်တကယ်သင်လုပ်နိုင်သည်၊ ၎င်းကိုအောင်မြင်ရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။ သူတို့ဘာတွေလဲ သိချင်ပါသလား။
စာရင်းသွင်းသူများသည် Twitch ကို ဆိုလိုသည်။ ကြော်ငြာများကို မကြည့်မိစေရန် ချန်နယ်ကို စာရင်းသွင်းထားသူများ (တခါတရံ အလွန်လေးလံသော) နှင့် အခြားဝန်ဆောင်မှုများ (ဥပမာ၊ စိတ်ကြိုက်စတစ်ကာများ) ကို ရယူပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒါက တော်တော်များများ မသိတဲ့အရာ၊ ဗီဒီယို၏ ဇာတ်ဆောင်နှင့် စကားပြောနိုင်သည်။. ဆိုလိုသည်မှာ သင်သည် သူနှင့် စကားပြောနိုင်သည်၊ စာရေးနိုင်သည်။
ဤအကြောင်းကြောင့်, များစွာသော subscription ကိုပေးဆောင်နှင့် ၎င်းသည် သင်ရရှိမည့် အတည်ငြိမ်ဆုံး ၀င်ငွေများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။အဲဒီအဖွဲ့နဲ့ ကောင်းကောင်းချိတ်ဆက်ပြီး သူတို့ကို တစ်လပြီးတစ်လ သက်တမ်းတိုးခိုင်းနေသရွေ့၊
Twitch သည် ထိုစာရင်းသွင်းသူ၏ စာရင်းသွင်းမှု၏ 50% ကို သင့်အား ပေးဆောင်သည်။နှင့်အခြားသူစောင့်ရှောက်။ ဒါပေမယ့် ကြည့်လိုက်တော့ ပရိသတ် 10.000 ကျော်နေပြီ။ထို့နောက် ဖြန့်ဖြူးရေး 70/30 ဝန်းကျင်က သင့်အတွက် ပိုအကျိုးများပါတယ်။.
စာရင်းသွင်းမှု ဘယ်လောက်တန်ဖိုးရှိလဲ။ ချန်နယ်များပေါ်တွင်မူတည်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ယူဆသော်လည်း၊ ယေဘူယျအားဖြင့် တစ်လလျှင် ၃.၅ ယူရိုဖြစ်သည်။. ဒါကြောင့် တားမြစ်သင့်တယ်လို့ လူအများက ယူဆတဲ့ပမာဏ မဟုတ်ပါဘူး။
Twitch တွင်ငွေရှာရန်နောက်ထပ်နည်းလမ်း အလှူငွေများ သို့မဟုတ် အကြံပြုချက်များဖြစ်သည်။ဘာပဲခေါ်ချင်၊ ၎င်းသည် ချန်နယ်နှင့် ဗီဒီယိုတွင် သူတို့ကြိုးစားအားထုတ်မှုအတွက် ဗီဒီယို၏ဇာတ်ဆောင်ကို လူသိရှင်ကြား ကျေးဇူးတင်သည့်နည်းလမ်းဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ကို ဆုချသည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။
အားလုံးရဲ့အကောင်းဆုံး ပေးသောငွေသည် သုံးစွဲသူအတွက် 100% ဖြစ်သည်။၊ Twitch သည် သူ့လက်ကို အပ်ရန် ဤနေရာသို့ မ၀င်ရောက်ဘဲ ပေးအပ်ပါက ၎င်းကို အမှန်တကယ် ထိုက်တန်သောကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း သူနားလည်သည်။
စပိန်ကိစ္စတွင်၊ ၎င်းသည်အများကြီးမယူပါ၊ သို့သော်၎င်းသည် Twitch မှတဆင့်နောက်ထပ်ဝင်ငွေတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်သည်။
YouTube ကဲ့သို့သော အခြားကွန်ရက်များကဲ့သို့၊ အမြတ်များများရရန် အခပေးကြော်ငြာများ ထားနိုင်သည်။. ဘယ်လိုလဲ? Twitch ၏ အခမဲ့ဗားရှင်းတွင် ၎င်းတို့တွင် ကြော်ငြာများရှိကြောင်း သင်သိထားပြီးဖြစ်သည်။ ဖြစ်သလို၊ ၎င်းကို Twitch နှင့် မျှဝေသော်လည်း သင်သည် အဆိုပါကြော်ငြာကို ငွေရှာနိုင်ပါသည်။.
အမှန်မှာ၊ ချန်နယ်သည် သက်ဆိုင်ရာဖြစ်လာသောအခါတွင် စာရင်းသွင်းသူများ ကြော်ငြာများပြသသည့်အထိ ဝင်ငွေပိုမိုရရှိရန် အခွင့်အလမ်းရှိသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သင်သတိထားရမှာက အဲဒါကို အလွန်အကျွံမလုပ်မိစေနဲ့ နောက်လတွင် စာရင်းသွင်းမှုကို ဖျက်ပစ်မည်ကို သင်အန္တရာယ်ဖြစ်စေပါသည်။.
ယခု ကျွန်ုပ်တို့သည် Facebook နှင့် အထူးသဖြင့် Instagram သို့ ကူးယူခြင်းသို့ ဆက်သွားပါမည်။ ငါတို့က အဲဒါကို လုပ်တာ။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများအတွက် Twitch ကို များစွာရှာဖွေနေပါသည်။အတက်ကြွဆုံးချန်နယ်များရှိပြီး ၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်များကို ကြော်ငြာရန် စာရင်းသွင်းသူအများဆုံးရှိသူများနှင့် ဗီဒီယိုဂိမ်းတွေဖြစ်နိုင်သလို ပွဲတွေလည်းဖြစ်နိုင်သလို သင့်တိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုရဲ့အလယ်မှာ ကြော်ငြာတစ်ခုတင်နိုင်ပါတယ်...
ထိုကွောငျ့, ကုမ္ပဏီက သင့်ကိုပေးချေပြီး ကြော်ငြာပေးတယ်။. မရှိတော့ပါ။ ထင်ရှားသည်မှာ၊ သင်သည် တစ်စုံတစ်ခုကို ဆန့်ကျင်ပြီး ကြေညာခြင်း သို့မဟုတ် ၎င်းသည် သင်၏ ပံ့ပိုးကူညီသူဖြစ်ကြောင်း မဖြစ်နိုင်ပေ။ ဒါပဲ မှားနေလို့ပါ။ "ရောင်းသည်" အဖြစ် အမှတ်အသားပြုပါမည်။. ဒါပေမယ့် ကိန်းဂဏန်းတွေအရ သူတို့ဟာ အလွန်အရည်ရွှမ်းနိုင်ပါတယ်။
လက်တွေ့နမူနာတစ်ခုသည် eCommerce ကိုအာရုံစိုက်သည်။
ဟုတ်ပါသည်၊ သင်သည် ဤအရာသည် ထုတ်လွှင့်သူများနှင့် သြဇာလွှမ်းမိုးသူများအတွက် ပိုဖြစ်သည်ဟု သင်ထင်နေသော်လည်း သင့်အတွက် ၎င်းသည် လုံးဝအလုပ်မဖြစ်ပါ။ ဒါပေမယ့် အမှန်ပဲ eCommerce အတွက် အလုပ်မဖြစ်ဘူးလား။ ကောင်းပြီ အမှန်တရားက မင်းမှားနေတယ်။.
တင်ပါရစေ အပတ်တိုင်း သတင်းရရှိသည့် အထည်ဆိုင်၏ ဥပမာ. ဤအသစ်အဆန်းများကိုပြသပြီး ကြည့်ရှုသူအားလုံးကို ဦးစားပေးသည့် ဗီဒီယိုကို အဘယ်ကြောင့်မပြုလုပ်ရသနည်း။ Live မှာတောင် စမ်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဒါမှ လူတွေကို ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ မြင်နိုင်မလဲ။
ဤသည်မှာ လူများစွာရှိသောကြောင့် ဗိုင်းရပ်စ်ဗီဒီယိုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် အဆိုပါ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုများကို စိတ်ဝင်စားနိုင်ပြီး ကြော်ငြာမပါဘဲ ကြည့်ရှုရန် စာရင်းသွင်းမည်ဖြစ်သည်။ဒါပေမယ့်လည်း ဇာတ်ဆောင်နဲ့ ဆက်ဆံပြီး သူ့ကို အဝတ်အစား ထပ်ပြဖို့ ဒါမှမဟုတ် သံသယတွေကို ဖြေရှင်းပါ။
ထိုဗီဒီယိုနှင့်အတူ ပံ့ပိုးကူညီမှုများ ရှိနိုင်ပါသည်။ (အဝတ်အစားတံဆိပ်များ)၊ စာရင်းပေးသွင်းထားနိုင်သလို လှူဒါန်းမှုများလည်း ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့လုပ်ဘို့
ဒါတင်မကဘူး။ နောက်ထပ် တိုက်ရိုက်ဗီဒီယို ရွေးချယ်ခွင့်သည် စတိုးဆိုင်တွင် ရှိနိုင်ပါသည်။. အဲဒါက ဘယ်လိုလဲ၊ ဘယ်နေရာမှာလဲဆိုတာ ပြပြီး ရာသီအလိုက် အရောင်တွေ၊ ၀တ်ဆင်လို့ရတဲ့ ဝတ်စုံတွေအကြောင်း ပြောပြပါ၊ ဒါမှမဟုတ် လူတွေကို အဝတ်ပေါင်းစပ်နည်းကို သိနိုင်အောင် ကူညီပေးလိုက်ပါ။ eCommerce တစ်ခုတွင် ဤအရာအားလုံးကို Twitch မှတစ်ဆင့် အမြတ်အစွန်းရနိုင်သည်၊ ၎င်းသည် အလွန်အမြတ်ထုတ်ခြင်းမရှိသေးသောကြောင့်ပင်။
ဗီဒီယိုဂိမ်းစတိုး၊ နည်းပညာစတိုးဆိုင်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့လည်း အလားတူလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
သင် Twitch တွင်ငွေရှာဝံ့ပါသလား။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ECommerce သတင်း » အီးကောမတ်စ » လူမှုကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး » Twitch မှာဘယ်လိုငွေရှာရမလဲ
IP တယ်လီဖုန်းဆိုတာ ဘာလဲ၊ သင့်လုပ်ငန်းကို ဘယ်လိုကူညီနိုင်မလဲ။